ပြည်ပ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက် အလက်များ | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home အခှငျ့အလမျး ပြည်ပ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက် အလက်များ
ပြည်ပ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက် အလက်များ
ပြည်ပနိုင်ငံအသီးသီးက မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အတွက် ခေါ်ယူနေတဲ့ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက် အလက်တွေကို တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
1. စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသူတွေအတွက် ကားကြီးမောင်းနှင်လုပ်ငန်းအတွက် အလုပ်သမားတွေကို PSA Company က ခေါ်ယူနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ပညာအရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်အနေနဲ့ အနည်းဆုံးအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းနဲ့ အထက်အောင်မြင်ပြီးသူတွေ ဖြစ်ရပါတယ်။
လုပ်ကိုင်လိုသူတွေအနေနဲ့ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရှိရမှာဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်စကား အခြေခံပြောတတ်သူကို ဦးစားပေးခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခြေခံလစာအနေနဲ့ စင်ကာပူဒေါ်လာ 570 နဲ့ အချိန်ပိုကြေးတွေကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းအတွက် အင်တာဗျူးကိုတော့ ဖေဖော်ဝါရီလ ဒုတိယအပတ်မှာ စတင်ခေါ်ယူသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
2.	စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ Mechancal Fitter ၀န်ထမ်းနေရာအတွက် Alpine Ship Yard Company ၀န်ထမ်းတွေ ခေါ်ယူနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရာထူးအတွက် အမျိုးသားဝန်ထမ်း ၈၀ကို ခေါ်ယူနေတာဖြစ်ပြီး အသက် ၃၅ နှစ်နဲ့ ၃၅နှစ်အောက် လျှောက်ထားသူတွေကို ဦးစားပေးခန့်အပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လျှောက်ထားသူတွေအတွက် အင်တာဗျူးကိုတော့ ဇန်န၀ါရီ တတိယအပတ်ကနေ စတင်ခေါ်ယူသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
3.	ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်လိုသူတွေအတွက် Tama Home Company ကနေ လက်သမား အလုပ်နေရာအတွက် ၀န်ထမ်းတွေကို ခေါ်ယူနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Training Visa Permit နဲ့ လုပ်ကိုင်ရမှာ ဖြစ်ပြီး ပညာအရည်အချင်းအနေနဲ့ အခြေခံပညာအထက်တန်းနှင့်အထက် ရှိရမှာ ဖြစ်ကာ ဂျပန်စာကို အနည်းဆုံး N-5 Level အထိ တတ်မြောက်ထားတဲ့ သူဖြစ်ရပါမယ်။ အခြေခံလစာအနေနဲ့ ဂျပန်ယန်းငွေ 140,000 ရရှိမှာဖြစ်ပြီး လျှောက်ထားသူတွေအတွက် အင်တာဗျူးကိုတော့ ဇန်န၀ါရီလ တတိယအပတ်မှာ စတင်ခေါ်ယူသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်
4.	မလေးရှားနိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသူတွေအတွက် Eppor Pack Sdn.Bhd လုပ်ငန်းတွေကနေ အလုပ်သမားတွေခေါ်ယူနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆောက်လုပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းအတွက် ခေါ်ယူနေတာဖြစ်ပြီး လုပ်သားဦးရေ အမျိုးသား 120 အထိ ခေါ်ယူနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပညာအရည်အချင်းအနေနဲ့ အခြေခံပညာအလယ်တန်းနဲ့အထက်၇ှိရမှာ ဖြစ်ပြီး အသက်အကန့်အသတ်အနေနဲ့ 35 နှစ်အောက် လျှောက်ထားသူတွေကို ဦးစားပေးခေါ်ယူသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
5.	မလေးရှားနိုင်ငံမှာ အီလက်ထရောနစ်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်လိုသူတွေအနေနဲ့ကတော့ Scope Manufacturers (M) Sdn.Bhd (|Electronics ) Company ကနေ ၀န်ထမ်းတွေကို ခေါ်ယူနေပါတယ်။ ၀န်ထမ်းမိန်းကလေးတွေကို ဦးစားပေးခေါ်ယူနေပြီး မိန်းကလေးဦးရေ 40အထိ ခန့်အပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အသက်အကန့်အသတ်အနေနဲ့ အသက် ၃၅ နှစ်အောက်၇ှိရမှာ ဖြစ်ပြီး အခြေခံပညာအလယ်တန်းနဲ့အထက် တက်ကျွမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Previous articleပြည်တွင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ
Next articleသင်တန်းပေါင်းများစွာ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးနေတဲ့ သုခစုစံအလုပ်အကိုင်သင်တန်းကျောင်း